merolagani - भोलि देखि आउने अनलाइन प्रणाली मार्फत यसरी गर्न सकिन्छ शेयर कारोबार
भोलि देखि आउने अनलाइन प्रणाली मार्फत यसरी गर्न सकिन्छ शेयर कारोबार
लामो समयको प्रतिक्षा पछि अन्तत शेयर कारोबार अनलाइन प्रणाली मार्फत हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कार्तिक २० गते अर्थात् भोलिदेखि औपचारिक रुपमा अनलाइन कारोबार सुरु गर्ने बताएको छ ।
नेप्सेले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हातबाट अनलाइन कारोबरको शुभारम्भ गर्ने भएको हो ।
भोलि देखि सुरु गर्ने भनिएता पनि केहि समयका लागि ब्रोकरहरुले मात्र प्रयोग सक्ने सेक्युर सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख सन्तोष मैनालीले मेरो लगानीलाई जानकारी गराए ।
लगानीकर्ताले पुरानै प्रक्रियाबाट शेयर खरिद बिक्रीको आदेश दिनेछन् तर ब्रोकरले भने अनलाइन प्रणाली मार्फत नै नेप्सेमा शेयर कारोबार गर्ने आदेश पठाउने र केही दिन पश्चात मात्र लगानीकर्ताको लागि खुल्ला हुने मैनालीले बताए ।
अनलाइन मार्फत जुनसुकै स्थानबाट पनि शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताहरु यसको ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेका थिए । अहिले शेयर खरिद बिक्री गर्न लगानीकर्ता शेयर दलालको कार्यालय जानै पर्ने हुन्छ ।
अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले शेयर खरिद बिक्री गर्दै आएको ब्रोकर कार्यालयबाट युजरनेम र पासवर्ड लिनु पर्ने हुन्छ ।
जसका लागि लगानीकर्ताको हितग्राही खाता नम्बर, बैंक खाता नम्बर, इमेल र फोन नम्बर सहितको विवरण फारम ब्रोकर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस पश्चात ब्रोकरले लगानीकर्ताको युजर नेम र पासवर्ड नेप्सेको सिस्टममा कनेक्ट गर्ने छ । सिस्टममा कनेक्ट भएपछि नेप्सेले युजर नेम र पासवर्ड लगानीकर्ताको इमेलमा पठाउने छ । युजर नेम र पासवर्ड पाइसकेपछि लगानीकर्ताले आफू अनुकुल पासवर्ड परिवर्तन गरेर शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्ने छन् ।
अनलाइन प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नका लागि सर्वप्रथम ब्रोकर र लगानीकर्ता बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने सन्तोष मैनालीले जानकारी गराए । ब्रोकर र लगानीकर्ताको दायित्व, जिम्मेवारी र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुने मैनालीले बताए ।
अनलाइनबाट कारोबार कसरी हुन्छ ?
अनलाइन शेयर खरिद बिक्री आदेश दिँदा इन्टरनेटको मध्यमबाट लगानीकर्ताको हितग्राही खाता ब्रोकरका माध्यमबाट सिधै नेप्सेमा जोडिन्छ । नेप्सेले शेयर आदेशको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङमा पठाउँछ । सीडीएसले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि पुनः लगानीकर्ताको खरिदबिक्री आदेश नेप्सेमा पठाउँछ । त्यसपछि नेप्सेले उक्त आदेश पुनः ब्रोकर कम्पनीलाई पठाउँछ ।
त्यसैगरी ब्रोकरले नेप्सेको आदेश पाइसकेपछि बैङ्कमा जम्मा हुनुपर्ने २५ प्रतिशत ब्यालेन्स तथा हितग्राही खातामा शेयर भए नभएको जाँच गर्छ । लगानीकर्ताको बैंक खातामा ब्यालेन्स तथा बिक्रीकर्ताको हितग्राही खातामा शेयर भएको अवस्थामा लगानीकर्ताको आदेश अनुसारको शेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिदिन्छ ।